मृ’त्यु भएको एक महिनापछि घटनाले लियो नयाँ मोड, श्रीमानमाथि नै एस्तो गम्भिर आरोप !! (भिडियो हेर्नुस्) - Babal Khabar
मृ’त्यु भएको एक महिनापछि घटनाले लियो नयाँ मोड, श्रीमानमाथि नै एस्तो गम्भिर आरोप !! (भिडियो हेर्नुस्)
November 9, 2020 November 9, 2020 by bikash
धरानमा विवाह गरेको दुई महिनामै युवतीको निधन भएको घटनाको अनुसन्धानको क्रममा घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । श्रीमतिलाई अनुचित द’वा’व दिएर दे’ह त्या’ग गर्न बा’ध्य पारिएको घटनामा श्रीमान माथि मु द्दा परेपछि सिंगापुर प्रहरीले नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखामा जानकारी मागेको छ ।
श्रीमतिको नेपालमा निधन हुँदा पनि श्रीमान २२ वर्षीय आइतराज माबो नेपाल फर्किएका छैनन् । उनको श्रीमति सोनियाङ्मा लिम्बूको विवाह गरेको दुई महिनामै निधन भएको हो । सोनिको माइती पक्षले उनको ज्या न लि ए को आरोप लगाएका छन् । धरान उपमहानगरपालिका-११ बसोबास रहेका माबोको स्थायी घर झापा अर्जुनधारा नगरपालिका-४ हो। श्रीमती सोनियाङ्मा लिम्बूको दे”ह त्या’ग गर्न बाध्य पारेको मु द्दा मा अदालतले माबोविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। उनका श्रीमान्ले सिंगापुरमै बसेर म्यासेन्जर मार्फत सोनिका केटा साथीहरुसंग उनका बारेमा सोधखोज गर्ने र अनावश्यक संका गर्ने गरेका थिए । *** यो समाचार पुरा हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
‘आफ्नो संगठनमा कार्यरत् नेपाली युवालाई अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि सिंगापुर प्रहरीले नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखालाई सोबारे सोधेको छ,’ सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक कमल थापाले भने, ‘मु द्दा चलाउने निकाय इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले इन्टरपोल शाखामा सो घटनाबारे जानकारी पठाइसकेको छ ।’ विवाह गरेको दुई महिना पछि नै श्रीमान् ले स’म्ब’न्ध वि’च्छे’द गर्न द’वा’व दिएका कारण सोनिले त्यस्तो निर्णय लिएको आशंका गरिएको छ ।
उनका श्रीमान्ले सिंगापुरमै बसेर म्यासेन्जर मार्फत सोनिका केटा साथीहरुसंग उनका बारेमा सोधखोज गर्ने र अनावश्यक संका गर्ने गरेका थिए । सोनिको साथीसंग म्यासेन्जरमा गरेको कुराकानी पनि सार्वजनिक भएका थिए । उक्त जानकारी पठाएपछि ती युवाले सिंगापुर प्रहरीमा आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट ह्या’क गरी कसैले श्रीमतिसंग अरुले नै कुराकानी गरेको दावी गर्दै निवेदन दिएका छन् । उनको फेसवुक अकाउण्ड ह्या’क भए नभएको बारेमा पनि अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ ।
Prevछोरीको शव गा’ड्’न गएका पितामाथि भगवानको कृपा परेपछी भयो सोच्नै नसकिने चमत्कार !! [भिडियो हेर्नुस्]
nextप्रेमीले छोडेपछि रिस फेर्न कुकुरसंग विवाह गरेकी युवतीलाई पर्‍यो सोच्नै नसकिने बज्रपात !!